China Cryptococcal Antigen Ule na-emepụta na ndị na-ebu ya | Na-adanye Bio
Bu n'obi iji
Nzọụkwụ dị ike® Cryptococcal Antigen Rapid Test Device bụ ngwa ngwa immunchromatographic nyocha maka nchọpụta nke polysaccharide capsular. antigens nke ụdị Cryptococcus mgbagwoju anya (Cryptococcus neoformans na Cryptococcus gattii) na ọbara, plasma, ọbara dum na ụbụrụ ụbụrụ (CSF). Nnwale ahụ bụ ọgwụ iji ọgwụ eme ihe eji eme ọgwụ nke nwere ike inye aka nanchoputa nke cryptococcosis.
Cryptococcosis sitere na umu abuo di iche-iche di iche-iche (Cryptococcus neoformans na Cryptococcus gattii). Ndị nwere nkwarụcell-mediated ọgụ bụ ihe kasị dị ize ndụ nke ibute ọrịa. Cryptococcosis bụ otunke ọrịa na-ebutekarị ọrịa na-arịa ndị ọrịa AIDS. Nchọpụta nkeEjirila antigen cryptococcal na ọbara na CSF mee ihe nke ukwuu nnukwu uche na nkọwa.
Nzọụkwụ dị ike® Ezubere Ngwaọrụ Nnwale Ngwa ngwa ngwa Cryptococcal Antigen ka chọpụta ụdị ihe dị iche iche nke Cryptococcus site na nkọwa ntụgharị nke agba mmepe n'ime warara dị n'ime. Emere akpụkpọ ahụ ejiri mgbochiCryptococcal monoclonal antibody na mpaghara ule. N'oge ule ahụ, ụdị ahụna-ekwe ka mmeghachi omume na monoclonal mgbochi Cryptococcal antibody acha akụkụ conjugates, nke precoated na conjugate pad nke ule. Ngwakọta ahụna-akpali na akpụkpọ ahụ site na iji okpu arụ ọrụ, ma soro ndị reagents na-emekọrịta ihe na akpụkpọ ahụ. Ọ bụrụ na enwere ezoro Cryptococcal antimens na ụdị, achaband ga-etolite na mpaghara ule nke akpụkpọ ahụ. Ọnụnọ nke agba agba ana-egosi nsonaazụ dị mma, ebe enweghị ya na-egosi nsonaazụ na-adịghị mma. Ọdịdịnke ụcha nwere agba na mpaghara njikwa na-eje ozi dị ka njikwa usoro. Nke a na-egosina agbakwunyela ezigbo ụda nke ihe nlele ahụ ma na-eme ka akpụkpọ ahụ mere.
■ Ihe a bụ maka naanị iji nyocha VITRO.
■ Ihe a bụ maka ỌR PR ọkachamara naanị.
Jiri nlezianya gụọ ntuziaka ndị ahụ tupu ịme ule ahụ.
Ngwaahịa a enweghị ihe ọ bụla sitere na mmadụ.
Ejila ihe dị na kit mgbe ụbọchị mmebi gachara.
Mee ihe nlele niile dị ka ihe nwere ike ibute ọrịa.
■ Soro usoro nyocha ụlọ nyocha na usoro biosafety maka njikwa na mkpofu nke ihe nwere ike ibunye ọrịa. Mgbe usoro nnwale dịzuru ezu, tufuo ihe nlele mgbe ichoputara ha na 121 ℃ ma ọ dịkarịa ala 20 min. N'aka nke ọzọ, a pụrụ iji 0,5% Sodium Hypochlorite gwọọ haruo ọtụtụ awa tupu mkpofu.
■ Ejila ọnụ apị apị n'ọnụ ọnụ ma ghara ị smokingụ sịga ma ọ bụ rie ihe mgbe ị na-eme ihe assays.
■ Yiri uwe aka n'oge usoro niile.
Nke gara aga: Chlamydia Antigen
Osote: HSV 12 Antigen Ule
Nnwale ngwa ngwa maka Sars-Cov-2 Antigen
Sars-Cov-2 Antigen Ule
H. Pylori Ag Ngwa Ule Na-achọpụta Antigen, Coronavirus Antigen Nnwale Ngwa, Akwụkwọ akụkọ Coronavirus Rapid Test Ket, Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Nnwale Nnwale, Igm / Iggrapid Ule Nnwale, Coronavirus Maka Covid-19 Ule,